Argus ilay mahazatra sy mahery fo Annihilator - Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra | Antorus ilay seza fiandrianana mirehitra, Torolàlana ho an'ny lalao, fanafihana | WoW Guides | WoW Guides
Argus ilay mahazatra sy mahery fo Annihilator - Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra
Adriel Diaz | | Antorus ny seza fiandrianana mirehitra, Game Guide, fanafihana
Hey sakaiza! Manao ahoana ianao amin'ny voodoo? Androany izahay manome anao ny torolàlana farany ho an'ny lehiben'ny Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra. Argus the Annihilator no tsy maintsy atrehantsika hamaranana ny fanafihana. Tsy mila ado intsony, ny nougat!
1 Argus the Unmaker
2 Fampahalalana ankapobeny
4 Fampivoarana ny fivoriana
5 Torohevitra momba ny fivoriana
6 Spoils of Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra
Afatory Natolotra. Tsy mahalala afa-tsy fanaintainana ho an'ny fiainana. Fanahy torotoro mamelona fahotana tsy manam-petra. Miantso anao ny mpampianatra. Mitsangàna ... Mitsangàna! Manomboka ny faran'ny zavatra rehetra. Argus the Unmaker no ho tompon'andraikitra farany hatrehintsika ao Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra. Miomàna fa ady lehibe io.
Amin'ny fihaonan'i Argus the Annihilator, tompon'andraikitra farany an'ny tarika Antorus, ny Throne Throne, dia hisy dingana efatra miaraka amin'ny mekanika marobe ao amin'izy ireo. Amin'ny telo amin'izy ireo dia hiatrika mivantana amin'i Argus isika (dingana 1, 2 ary 4) raha amin'ny dingana 3 kosa dia hiady amin'ireo antokon-kintana izy.
Mandritra ny dingana tsirairay dia hahazo ny fanampian'ny Pantheon Titans izay hanome hery anay izahay ary hampitombo ny DPS ho fanampin'ny fanampiana anay amin'ireo mekanika lehibenay.
Mba hisorohana ny tsy ampoizina, eo amin'ny dingana 3 sy dingana 4, argus Hamono ny tarika iray manontolo izy fa i Eonar, ny Patron of Life, dia hanangana antsika amin'ny maty hanohy ny fivoriana.
Dingana 1 Fahaizana: Sky sy Storm
Cones maty -> Zavona maty
Soul Blight Orb -> Aretin-tsaina -> Zavona maty
-Fanampiana an'i Golganneth
Lanitra sy ranomasina -> Fanomezana avy any an-danitra > (Herin'ny Lanitra) / Fanomezana amin'ny ranomasina > (Herin'ny ranomasina)
Fahaizana dingana 2: Ilay mpiaro navotana
-argus : Rehefa milatsaka hatramin'ny 70% ny fahasalamany dia hanomboka handroaka i Golganneth [Fahatezeran'i Golganneth], fanadiovana na inona na inona Zavona maty ny faritra iadiana.
Fanahy miovaova -> Fipoahan'ny fanahy > (Fanapoahana fanahy) / Baomba fanahy > (Fanapoahana baomba fanahy)
-Help avy amin'i Aggramar
Aggramar Avatar -> Favorite an'i Aggramar
Dingana 3 Fahaizana: Arcane Masters (Ara-dalàna sy mahery fo)
-argus : Rehefa milatsaka hatramin'ny 40% ny fahasalamany dia hampandresy azy i Aman'thul Fipoahana vonjimaika . Tsy maintsy hiatrika ny kintana amin'ny Argus ny mpilalao.
- Vondron-kintana voatendry
Fanilo Cosmic -> Fanorotoroana kosmika
Tsy azo ihodivirana tsy azo ihodivirana (Herim-po sy angano) -> Tsy azo ihodivirana
Sabatra ny cosmos -> Herin'ny cosmic
-Ny fanampiana an'i Organnon
Ireo kapila Norgannon
Dingana 4 Fahaiza-manao: Ny fanolorana fiainana, ny forge ny fahaverezana
Ny faran'ny zavatra rehetra
Ember of Fahatezerana
Scythe tafahoatra (Mahazatra)
Scythe mahafaty (Heroic)
-Ny tontolon'ny fanahy
Fanahy noana -> Fanapoahana fanahy
-Help avy any Eonar
-Help an'i Khaz'goroth
Titan Forge -> Sanganasan'ny titan
Fampivoarana ny fivoriana
Araka ny efa hitantsika, ny fihaonana dia hasiana mekanika eo anelanelan'ny dingana samihafa, izay maharitra ny fotoana ary, raha tsy misy ny tsy fahombiazana, dia mety hiteraka tsy fahombiazana tanteraka.
Dingana 1: Sky sy Storm
Rehefa manomboka ny tolona, argus hampiasa ny mpampianatra Scythe tafahoatra, manasa lamba amin'ny scythe eo alohany manimba ary manampy debuff izay hampitombo ny fahasimban'ny famafana manaraka amin'ny 75%. Ity fahaiza-manao ity dia tsy maintsy hohanin'ny tanky ary tsy maintsy hatakalo isaky ny 3 marika. Ny mpilalao rehetra dia tsy maintsy mijanona eo an-damosin'ny sefo mba tsy hanimba izany fahaizan'ny fahavoazana izany. Hampiasa ihany koa izy io Fahatezerana nampijaliana izany, tsotra, dia hanimba ny tarika rehetra. Momba ny fahasahiranan'i Heroic, ity fahaiza-manao ity dia hiova avy amin'ny debuff 75% ho 150%.
Hafa amin'ireo fahaizantsika tsy maintsy raisintsika mandritra ity dingana voalohany ity ny Soul Blight Orb. Izy io dia hanamarika mpilalao telo miaraka amin'ny debuff izay, rehefa tapitra ny andro, dia hamela dobo alokaloka amin'ny tany miatrika fahasimbana tsy tapaka rehefa mandalo izy io. Ireo voakasik'izany dia tsy maintsy misaraka amin'ny sisa amin'ny bemidina hametrahana ireo blèta ireo amin'ny sisin'ny fihaonana.
rehefa argus manangona angovo 100p, handefa ny fahaiza-manao Cones maty amin'ny mpilalao sendra, miala Zavona maty Hanimba ny mpilalao mijanona eo io. Ireto zavona ireto dia hanjavona amin'ny dingana manaraka, saingy hanery anay hitazona fihodinana tokana izy ireo, ny meeles rehetra dia tsy maintsy miara-mitoetra, toy ny mpanasitrana sy ny DPS misy laharana, amin'ny tsipika mifandraika amin'ny lehibena, ka ianareo rehetra dia eo an-damosin'i Argus. Boribory ny efitranon'ny sefo ka tsy maintsy mameno tsikelikely an'ity efitrano ity isika. Zava-dehibe ny fanatanterahana an'ity mekanika ity satria ny toerana tsy dia tsara na ny DPS ambany no hamenoana ny efitrano amin'ity mistana ity, hamela antsika tsy hanana toerana hipetrahana.
Mandritra ny dingana voalohany, ny Titan Golganneth dia hanampy antsika, manamarika mpilalao roa miaraka Fanomezana avy any an-danitra y Fanomezana amin'ny ranomasina tsirairay avy izay hamela, aorian'ny vokany, orb amin'ny tany izay hanome Herin'ny Lanitra y Herin'ny ranomasina hanakatona ireo mpiara-dia. Ireo orb dia haharitra iray minitra. Ireo buffs ireo dia tsy afaka mijanona raha tsy mijanona eo akaikin'ny orb mitovy ny mpilalao. Ny hevitra dia ny iray amin'ireo bolabola napetraka ao amin'ny meele ary ny iray hafa lavidavitra lavitra mba hahafahan'ny tarika iray manontolo mahazo tombony amin'ireo buffo ireo. Tsy afaka mahazo tombony amin'ny buffs roa izy ka aza manandrana mametraka azy amin'ny toerana iray. Amin'ny fahasahiranan'i Heroic, ireo buffs ireo dia 30 segondra izao fa tsy 1 minitra.
rehefa argus milatsaka amin'ny 70% amin'ny fahasalamanao farany ambony, hanomboka ny dingana faharoa amin'ny fanamby.
Dingana 2: Ny Mpiaro no navotana
Amin'ny alàlan'ny fampidinana an'i Argus the Unmaker ho fahasalamana 70% dia hampiasa Golganneth Fahatezeran'i Golganneth, mamorona tafio-drivotra elektrika izay hanarona ny sisin'ny efitrano ka manery ny mpilalao rehetra hifindra eo afovoan'ny efitrano, satria ireo mpilalao mijanona ao anatin'ity tafio-drivotra ity dia hahazo fahasimbana be. Hanadio ny rehetra ihany koa ity mpampianatra ity Zavona maty an'ny dingana teo aloha. Ity rivo-doza ity dia haharitra segondra roa ka tokony hijanona eo afovoany ianao mandra-pahatapitry ny farany satria hifindra tetezamita kely ianao amin'ny fanombohan'ny dingana 2
Ny tanky dia hanohy hifanakalo ny boss aorian'ny marika telo an'ny Scythe tafahoatra ary ny gang dia hanohy hijanona ao ambadiky ny lamosin'ny boss mba hisorohana ny fahasimbana amin'ity fahaizana ity.
Fanaparitahana Ho fahaiza-manao lehibe izay tsy maintsy raisintsika satria ny scythes isan-karazany dia hiseho ao amin'ny faritra misy ady izay hanimba be an'ireo mpilalao voadona. Mba hisorohana ny fahasimbana amin'ity fahaiza-manao ity dia tsy maintsy atrehin'ireo mpilalao ny toerana tondroin'ny scythe, ialàny mijanona amin'izany lalana izany, ary ialàna amin'ireo faritra mety hanakaiky azy.
Amin'ity dingana ity dia tsy maintsy hiatrika isika Fanahy miovaova, fahaiza-manao atolotry ny sefo rehefa mahatratra angovo 100%. Ity fahaiza-manao ity dia hihatra amin'ny mpilalao roa Fipoahan'ny fanahy efa iray Baomba fanahy miaraka amin'izay. Fipoahan'ny fanahy dia hiatrika fahasimbana isaky ny 3 segondra mandritra ny 15 segondra, hipoaka noho ny Fanapoahana baomba fanahy rehefa tapitra io vokany io. Mba hisorohana ny fahasimbana amin'ity fahaiza-manao ity, ny mpilalao voan'ny Fipoahan'ny fanahy Hapetraka lavitra ny sisa amin'ny fanafihana araka izay tratra izy ireo satria hihena io fahasimbana io arakaraka ny halaviran'ny misy azy ireo. Zava-dehibe ny hitantanan'ilay Mpitarika Raid an'io toe-javatra io sy ny fametrahana ireo mpiara-dia ary tadidiny fa tsy maintsy hifindra amin'ny toerana iray amin'ny ady izy ireo mba hisorohana ny tsy fahombiazana mety hitranga. Ny fahasimban'ny Baomba fanahy hitombo be izany amin'ny fahasahiranan'i Heroic.
Baomba fanahy dia hanao zavatra mitovy amin'ny Fipoahan'ny fanahy ihany, ny faritra hanimba ny bemidina iray manontolo, hanimba ny lasibatra ihany koa, miatrika fahasimbana betsaka araka izay tratra. Izany no antony tsy maintsy anarahan'ny tanky an'ity mpilalao ity noho ny tombony homen'ny Aggramar antsika ary hanazava eto ambany izahay.
Ireto ny toerana izay tazominay ho an'ireo fahaiza-manao ireo:
Araka ny nanamarihanay azy dia izao no ho fanazavana ny sary:
Faribolana mainty: argus
Faribolana mena: Fipoahan'ny fanahy
Boribory mavo: Baomba fanahy
Amin'ity dingana ity dia hahazo ny fanampian'ny Aggramar izay handefa ny mpampianatra izahay Aggramar Avatar ary hanome 100% bebe kokoa ny tanky ary haingam-pandeha 40% mandritra ny iray minitra. Ankoatr'izay dia hanome mpiara-miasa akaiky izy io Favorite an'i Aggramar izay hiteraka fahasimbana alaina any amin'ny tanky. Amin'izany fomba izany, ny iray amin'ireo fiara mifono vy dia hijanona amin'ny lehibeny raha ny iray hafa kosa hiaraka amin'ilay mpilalao voakasiky ny Baomba fanahy manakana azy tsy ho faty.
Dingana 3: The Arcane Masters (Ara-dalàna sy mahery fo)
Rehefa ny fahasalaman'ny argus nilatsaka hatramin'ny 40%, hanomboka ny dingana fahatelo amin'ny ady, amin'izay dia hiankohoka amin'ny lohaliny izy noho ny fampiasan'i Aman'thul Fipoahana vonjimaika. Mandritra io dingana io, tsy ho voatafika i Argus ary, raha izany, hisy kintana fito hipoitra izay hanefy ireo fahaiza-manao izay hisy fiatraikany amin'ny fanafihana iray manontolo ary tsy maintsy resy:
Taratra kosmika dia hanao zavatra mitovy amin'ny Fanaparitahana io ihany no hanadio sisiny. Ny mpilalao dia tokony hitandrina ary hijery ny toerana hanipazana azy ireo mba hialana amin'ny fotoana mety.
Fanilo Cosmic dia fahaiza-manao izay tsy maintsy tapakaina amin'ny vidiny rehetra satria, raha tsy tapaka, ny fahavoazana mety hitranga amin'ny mpilalao kendrena ary ny fanafihana iray manontolo dia mety hanimba.
Fipoahana kintana fandefasana izay mety ho tapaka fa tsy maintsy ataontsika laharam-pahamehana ilay teo aloha.
Amin'ny fotoana iray amin'io fihaonana io, ny roa amin'ireo antokon-kintana dia hahazo fitaovam-piadiana ary tsy maintsy hamono azy ireo ny tanky:
Hahazo iray amin'ireo kintana Sabatra ny cosmos hanatsara izany noho ny Herin'ny cosmic sy ny kintana izay akaiky azy. Ity no antokon-kintana izay tsy maintsy mihetsika ao anatin'ny efitrano ary tokony hifantohana satria tsy azontsika atao ny manome hery ny sisa amin'ireo antokon-kintana.
Ny iray kosa hahazo Bladesin'ny mandrakizay ary ny tanky dia tsy maintsy hitondra azy eo am-paran'ny efitrano amin'ny iray amin'ireo antokon-kintana velona mba hahafahany manararaotra ny fahaizany hatramin'ny farany ary manimba ny fahavalo roa tonta.
Momba ny fahasahiranan'i Heroic, ny kintana dia hahazo fahaizana fanampiny antsoina hoe Tsy azo ihodivirana.
Mandritra io dingana io dia hanampy antsika i Norgannon, amin'ny fampiasana ny mpampianatra Ireo kapila Norgannon izay hahatonga ny antokon-kintana hahazo fahavoazana arakaraka ny sekolin'ny famosaviana, fanerena ny mpilalao hamely ireo kintana izay manana fahalemena arakaraka ny famosaviana mba hanao fahavoazana farany azo atao:
LAMBA VOLOMPARASY Fahalemen'ny Arcane
GREEN Fahalemena amin'ny natiora
BLUE Fahalemena amin'ny fanala
Naranja Fahalemena amin'ny afo
Rojo Marefo ara-batana
Blanco Fahalemena masina
BLACK Fahalemen'ny aloka
Hiseho amin'ireto toerana manaraka ireto ireo kintana hafa:
Rehefa resy daholo ny kintana rehetra dia hifarana ny dingana.
Dingana 4: Ny fanolorana fiainana, ny forge an'ny fahaverezana
Ho hitantsika hoe rahoviana no hanomboka ity ady ity satria hitondra antsika any amin'ny toerana feno lolosy sy vatomamy ... tsara tsia, hamono antsika rehetra izy ireo fa i Eonar, ilay Mpiaro ny Fiainana, dia hamorona hazo ahafahantsika mitsangana amin'ny maty hanohy ny ady. Hitsangana amin'ny maty isika rehefa miditra amin'ilay hazo. Na izany aza, ity hazo ity dia manana% ny fahasalamana izay hihena ho an'ny mpilalao tsirairay izay mamerina amin'ny laoniny ankoatr'izay hisy maro ny spawns maloto izay, rehefa mandalo azy ireo, dia hipoaka hanosika antsika hiverina ary hanampy ny debuff Fanapoahana fanahy. Rehefa very ny fahasalamany rehetra ilay hazo dia ho afaka hanasitrana azy ireo ireo mpitsabo na dia mbola hamela antsika hitsangana amin'ny maty ihany aza izy io fa hanampy debuff manangona antsoina hoe Fakany malazo izay hanimba antsika isaky ny segondra.
Rehefa manomboka ny dingana fahefatra amin'ny fihaonana dia ho hitan'i Argus fa eo afovoan'ny famindrana ny tolona izy Ny faran'ny zavatra rehetra. Ity fahaiza-manao ity dia hamono ny fanafihana iray manontolo raha tsy tapaka izy io alohan'ny 15 segondra ary, noho izany dia tsy maintsy mamerina sy manatratra ilay hazo isika alohan'ny hamaranan'ny Argus ny fandefasana azy. Rehefa velona isika rehetra, dia ho tonga ny fotoana hampiasana ny BL hanafohezana araka izay azo atao ny dingana.
Ho an'ity dingana ity dia hampiasa fahaiza-manao sasany amin'ny dingana teo aloha ary koa ny sefo Fahatezerana nampijaliana, Scythe tafahoatra y Fanahy miovaova. Amin'ity tranga ity dia tsy hahazo ny fanampian'ny Aggramar izahay ka ilay mpilalao voakasik'izany Baomba fanahy tsy maintsy mampiasa hery fiarovana izy mba hialana amin'ny famafana azy na, ny mifanohitra amin'izay dia tsy maintsy mitsangana amin'ny maty izy ary tonga amin'ilay hazo rehefa maty izy hiverina any amin'ny tontolon'ny velona. Amin'ny fahasahiranana mahery fo, Scythe tafahoatra dia ho tonga Scythe mahafaty.
Amin'ny maha-zava-baovao azy, argus hahazo mpampianatra vaovao antsoina hoe ianao Ember of Fahatezerana Avelany fotsiny ny puddles amin'ny tany izay mila hialana mba hialana amin'ny fahasimbana sy ny marika manaparitaka avy amin'ireo faritra ireo. Hanana fahaizana mamorona modules apetrakao manodidina ny efitrano koa ianao. Hanomboka ireo Filaharana fanombohana ary hivelatra ny faritra rehefa mandeha ny fotoana, mandratra tena rehefa mihanaka. Tsy maintsy esorintsika ireo faritra ireo amin'ny sarany rehetra satria ny mpilalao miditra ao dia hahazo ny lanjan'ny Pulsa fialamboly. Ny DPS ranged no hiandraikitra ny fanafihana ireo sehatra ireo mba tsy ho lasa goavambe izy ireo.
Mandritra io dingana io dia hahazo ny fanampian'i Khaz'goroth isika izay, rehefa mahazo essai 20, dia hampita ny fahaizana Titan Forge, mampihatra an'ireo mpilalao rehetra amin'ny fanafihana Sanganasan'ny titan. Ity fahaiza-manao ity dia haharitra raha toa ka ny Titan no mamoaka ny Essences. Ireo essences ireo dia azo angonina any amin'ny tontolon'ny fanahy (sfera fotsy sy volomparasy).
Torohevitra momba ny fivoriana
Ity fihaonana ity dia hiorina amin'ny fisorohana ny faritra sy ny fanatanterahana tsara ny mekanika fotsiny. Izany no antony anomezanay torohevitra roa anao, mba tsy hadinonao ny zava-dehibe indrindra mandritra ny fivoriana.
Tazomy Argus amin'ny lamosiny amin'ny fanafihana ary ovao isaky ny telo marika Scythe tafahoatra.
Kitiho ny kintana rehefa mahazo Sabatra ny cosmos y Bladesin'ny mandrakizay.
Tohizo ny kintana Bladesin'ny mandrakizay manalavitra ireo sisa amin'ireo kintana mba hisorohana azy ireo tsy hihamatanjaka.
Raha tratry ny Aggramar Avatar, tsy maintsy miaro ireo mpilalao manana ianao Baomba fanahy ka ny Fanapoahana baomba fanahy.
Tazomy ny mpilalao Baomba fanahy y Fipoahan'ny fanahy tapitra ny aina.
Raha ianao no kendrena Baomba fanahy, mihetsika eo akaikin'ny tanky voan'ny Aggramar Avatar Hialana Fanapoahana baomba fanahy Novonoiko ianao
Sitrano ny hazo malazo mandritra ny dingana 4.
Raiso ny mampela herin'ny titanika raha matoatoa ianao.
Mijanona ao ambadiky ny lamosin'ny boss satria mahafaty ny famafana ny scythe.
Midira ao amin'ny Fanomezana avy any an-danitra na ny Fanomezana amin'ny ranomasina ary ampidiro ao foana mba tsy hanjavona ny buff.
Spoils of Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra
Raha ny zavatra tadiavinao dia ny hahafantatra ny fandrobana nomen'ity lehibeny ity, dia mamporisika anao izahay hitsidika ity rohy manaraka ity:
Raoter Team Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra
Araka ny hitantsika, ny fihaonana Argus the Annihilator dia tsy sarotra (toy ny tsy misy hafa) fa hitranga hatrany ny trangan-javatra izay terena hampiasa ny CD-nay mialoha na koa hampiasa ny mana rehetra hanoherana ny fanafihana mahery vaika ataon'ny sefo Amin'ny fiantombohan'ny lalao dia toa toa mila mandray mekanika marobe ianao nefa, soa ihany fa tsy dia saro-pantarina izy ireo. Na izany aza, dia iray amin'ireo fihaonana vitsivitsy izay ny fahasimbana, indraindray, dia ho sarotra tokoa ny hialana ary, araka ny efa noresahiko teo aloha, dia terena hanitsy ny hadisoan'ny sasany isika na ny hadisoantsika manokana aza. Na izany na tsy izany, isika rehetra dia manana kônta ao amin'ny fanafihana izay hahazoantsika zava-bita ho an'ny trys be indrindra ao amin'ny boss iray ihany. Noho io antony io dia antenainay fa ity torolàlana ity dia nanampy anao hamita ireo fanamby ireo amin'ny fomba tsara indrindra (afa-tsy ny cone, tsy azo atao izany).
Mandra-pahatongan'ny mpitari-dalana manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Argus ilay mahazatra sy mahery fo Annihilator - Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra
Vonjeo Hati: Ny fanentanana hitehirizana ny biby fiompy Hati